Professional Production PP 4L Small Plastic Buc ...
28mmpco 1810 uye pco 1881 mutsipa saizi pet preform anonyanya kushandiswa muCarbonated zvinwiwa. Kune imwe soda mvura uye mamineral mvura, zvakare iri sarudzo iri nani.
Kudhinda 18L Plastiki Bhaketi 4.5 Gallon Paint Pail ine Lid ine Handle
Mapurasitiki emabhagidhi anoshandiswa kurongedza mvura uye yakasimba zvigadzirwa senge pendi, namira, yekuwachira sipo, girizi, kemikari, fetiraiza, zvigadzirwa zvemumba, nezvimwe.
HDPE yakakwira density polyethylene kana polypropylene PP maviri matsva epurasitiki zvinhu izvo zvakanyanya asidhi uye alkali kuramba, ngura kuramba. Nenzira iyoyo, hupenyu hwemabhini hwakareba.
Kambani yedu ibhizinesi riri mudunhu reShandong, China. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira pet preform, migomo, bhokisi remasikati uye zvimwe zvigadzirwa zvepurasitiki. Isu tave tichiita epurasitiki munda kwemakore mazhinji, saka isu tine ruzivo rwakawanda uye tinogona kubatsira vatengi vedu nemhando dzese dzematambudziko. Nenzira iyoyo, Tave tichigadzira kubatana kwakanaka nevatengi.